वयस्क शिक्षा - कसरी स्कूल फर्केर जान | USAHello | USAHello
पनि एक वयस्क रूपमा, तिमी सक्छौ पढ्न र लेख्न सिक्न. यो एक वर्ग वा अभिभावक संग सिक्न सजिलो छ (एक-गर्न-एक शिक्षक). त्यहाँ वयस्क जान सक्नुहुन्छ थुप्रै ठाउँमा पाठ पढ्न र लेख्न को लागि हो. धेरै सामुदायिक कलेजहरु र पुस्तकालयहरु वयस्क शिक्षा केन्द्र पढेर सिकाउनु र लेखन छ.
धेरै समुदाय दिन वा साँझ अंग्रेजी कक्षाहरू छ. तपाईं पुस्तकालयहरु तिनीहरूलाई पाउनुहुनेछ, सामुदायिक केन्द्र, र कलेजहरु मा वयस्क शिक्षा केन्द्र मा. तिमी सक्छौ एक समुदाय कलेज फेला तिम्रो नजिक. कठिन छ भने तपाईं एक वर्ग प्राप्त गर्न को लागि, अनलाइन सिक्दै अंग्रेजी सुरु. तपाईं सिक्न मदत गर्न धेरै मुक्त कक्षाहरू छन्.
अमेरिकामा, वयस्क एक GED प्राप्त गर्न सक्छन्®, HiSET वा TASC उपाधि एक उच्च विद्यालय शिक्षा प्रतिस्थापन गर्न. तपाईं परीक्षण को लागि अध्ययन गर्न हुनेछ, तर यो उच्च विद्यालय भन्दा धेरै तेज छ. तपाईंको स्थानीय कलेज वा पुस्तकालय मा दिन वा साँझ कक्षाहरू छन्. वा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो निःशुल्क अनलाइन GED® तयारी कक्षा धेरै भाषामा.
जब तपाईं एक काम खोज्न, तपाईं आधारभूत काम कौशल हुन सक्छ. तपाईं एक कम्प्युटर कसरी प्रयोग गर्न सिक्न आवश्यक पर्दछ. या शायद तपाईं एक विशिष्ट काम को लागि तालिम गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै खाद्य उद्योग मा काम रूपमा. तपाईं काम केन्द्र मा काम प्रशिक्षण सबै प्रकारका पाउन सक्नुहुन्छ, resettlement एजेन्सीहरू, सामुदायिक कलेजहरु, र स्थानीय संगठनहरूको. सिक्न कसरी फेला काम प्रशिक्षण progams र कामको लागि सीप प्राप्त.
उच्च शिक्षा उच्च स्कूल पछि शिक्षा मतलब. उच्च शिक्षा अनलाइन कलेज वा विश्वविद्यालय वा हुन सक्छ.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सामुदायिक कलेजहरु सबै प्रकार को दुई वर्ष पाठ्यक्रम प्रस्ताव. तिनीहरूलाई थुप्रै तपाईं एक क्यारियर लागि तयार. एक समुदाय कलेज फेला तिम्रो नजिक.
विश्वविद्यालयहरु चार वर्ष वा अब पाठ्यक्रम प्रस्ताव. तपाईं विश्वविद्यालय देखि स्नातक भने, तपाईं को लागि जब एक डिग्री आवश्यक लागू गर्न सक्नुहुन्छ. कसरी पत्ता कलेज लागि लागू.
तपाईं पनि अनलाइन उच्च शिक्षा कक्षाहरू लिन सक्छ. Coursera अनलाइन पाठ्यक्रम र डिग्री पाउन.
फेला job training programs
FindHello तपाईंलाई नजिक वयस्क शिक्षा पाउन